आकाशबाट खसे १५ सयभन्दा बढी चरा: फेरि आएको हो नयाँ सं'कट? - NepalNews-24
आकाशबाट खसे १५ सयभन्दा बढी चरा: फेरि आएको हो नयाँ सं’कट?
एजेन्सी। अमेरिकाको फिलाडेल्फिया शहरमा गत शुक्रबार १५ सयभन्दा बढी चराहरू आकाशबाट अचानक खसे। तीमध्ये धेरैको ज्यान गयो। यी चराहरू जाडो महिना लाग्नुअघि दक्षिणतर्फ जाँदै थिए। यस्तै घटना सन् १९४८ मा पनि भएको थियो।
यति धेरै चराहरू अचानक मर्दा मानिसहरू तर्सेका छन्। फिलाडेल्फियामा वन्यजन्तु सम्बन्धी काम गर्ने स्टिफन म्यासिवेव्स्कीले भने, ‘अनेकौं चरा आकाशबाट खसिरहेका थिए। के भएको हो, हामीले थाहा पाएनौं । यो निश्चित रूपमा विनाशकारी घटना हो।’
अघिल्लो शुक्रबार बिहान ५ बजेदेखि ८ बजेसम्म आफूले ४०० चरा बटुलेको उनले बताए। यी चराहरू विभिन्न स्थानमा जाँदै गर्दा अग्ला भवनमा ठोकिएर खसेको बताइएको छ। घटना हुँदा उक्त क्षेत्रमा तापक्रम अचानक घटेको बताइएको छ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमले लेखे अनुसार, अनेकौं चराहरू अग्ला भवनका शीशामा ठोकिए। अग्ला भवनका शीशा चराहरूका लागि खतरनाक भएको भन्दै केही समयअघि अमेरिकी संसदमा एक विधेयक पेश गरेर अग्लो भवनमा शीशा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको थियो।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
Previous articleबैंकमा पैसा लिन ला-श आफै पु’गेपछि, कर्मचारीको सातो गयो (हेर्नुहाेस् पू’रा)
Next articleप्रयोग भइसकेको क’ण्ड’म बटुलेर महिलाले ग’र्थिन यस्तो काम, प्रहरी प’र्यो च’कित्”हेर्नुस् !!